Coaling Coal, Taageerada Bulshooyinka
Laga bilaabo Febraayo 1, 2016, miisaaniyadda bond ee McKnight Foundation ee $ 188 milyan waa dhuxul la'aan. Waa tallaabo aan sameynay si aan u sii dheellitirno maalgashadeena annaga oo leh yoolalka deeq-bixiyeyaasha ee dhisida dhaqaale yar-yar. Iyadoo horumarka isbeddelka dhaqaalaha ee dhaqaalaha, deynta dhuxusha ayaa u badan inay noqoto mid sii kordhaysa maalgashadayaasha muddada dheer.
Hannaanku wuxuu ahaa mid sahlan oo qarashkuna wuu hooseeyaa. Ugu horreyn, waxaan aqoonsanay shirkad shidaal oo cayilan iyo shirkado macdan ah oo leh kaydka dhuxusha. Tani waxay keentay inay iibiso oo keliya sideed shuruudood oo lagu qiimeeyay $ 1.6 milyan oo ka mid ah miisaaniyadda bangiga 1,500. Tirada yar ee marka la barbardhigo dhammaan dakhliga ku salaysan dakhliga oo dhan.
Baaritaanka shirkadaha dhuxusha
Ka dib, maamulaha, Mellon Capital Management, waxay naga caawisay inaan dhisno dhuxusha "dhoobo" si looga hortago iibsiyada mustaqbalka shirkadaha leh kaydka dhuxusha ee dhulka hoostiisa - oo loo yaqaano "shaashad" shidaal maalgashi. Bandhigaagu wuxuu wali ku jiraa shirkadahaas Isticmaal dhuxul si ay u dhaliyaan tamarta korontada sida farsamada gacanta ayaa durbadiiba ka dhigaya isbeddelka dhuxusha in ay sii kordhiyaan qiimaha tamarta la cusbooneysiin karo.
Dakhliga go'an ee aasaasiga ah ee 'McKnight Foundation' wuxuu ku biirayaa maalgelintiisa $100 milyan ee Istaraatiijiyadda Waxqabadka Kaarboon kaas oo sidoo kale ka reebaya shirkadaha dhuxusha u heellan. Si kale haddii loo dhigo, 15% ee hibeyntayada ayaa lagu nadiifiyey dhuxusha.
Tani waxay ka mid tahay Dadaallada socda ee McKnight Foundation si loo abaabulo dhammaan oo ah kheyraadkeena, oo ay ku jirto dayactirkeeda, si loo caawiyo dhisidda iyo xoojinta bulshooyinka, dhaqaalaha iyo deegaanka deegaanka sii jiri kara. Laga soo bilaabo 1992, waxaan $ 140 milyan oo deeqo ah ku siinnay ururada hormaraya mustaqbalka yar-yar. Tan iyo sannadkii 2013, waxan tallaabo qaadnay decarbonize our portfolio, dib-u-maalgalinta ee xal yar-carbon, iyo ka caawiyaan suuqyada u soo baxaan. Tani waxaa ka mid ah ballanqaadka in lagu dhaqaaqo $ 200 malyan oo maalgelin ah saameyn sare.
Taageeridda jaaliyadaha kala guurka
Sida ay muhiim u tahay maalgashiga mustaqbalka tamarta nadiifka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la taageero bulshooyinka ku tiirsan dhuxusha ee doonaya in ay dib u soo nooleeyaan dhaqaalahooda. Waxay ka soo baxaysaa dad ka yimid macdanta macdanta iyo beelaha ee shaqaalaha ka shaqeeya dhirta tamarta dhuxusha ay ku qabteen fursad ay ku bilaabi karaan ganacsiyo cusub oo waara oo abuuraya shaqooyin cusub.
Sababtan awgeed, Hay'adda McKnight Foundation waxay dhawaan dhistay $ 1 milyan oo maal-galin ah oo ah bangi yar oo aan faa'iido doon ahayn oo ku taal waddanka dhuxusha. The Sanduuqa Maalgashiga Dhaqaalaha ee Maalgalinta wuxuu lacag ka bixiyaa koonfur-bari Ohio oo dhan gobolka Appalachian. Waxay maalgelisaa ganacsiyada yaryar ee abuuraya shaqooyin, ilaalinta khayraadka dabiiciga ah, iyo kordhinta hantida bulshada. Kuwa kala duwan dadka qaata waxaa ka mid ah xarun weyn oo xayawaan xoolaad ah, xarun taariikhi ah oo u baahan dib-u-cusbooneysiin, ganacsi dimoqraadi ah, iyo deynta 88 shirkadaha West Virginia si loo yareeyo isticmaalka tamarta iyo dhimista kharashka. Baanka ayaa sidoo kale siiya ganacsatada iyo shirkadaha leh kaalmo farsamo oo qiimo leh si ay u koraan shirkadahooda.
Maalgashadayaasha Carbon-wareer badanaa way ku faraxsan yihiin tamarta dib-u-cusboonaysiinta tamarta iyo tiknoolajiyada tayada, waxaanan haysanaa sabab fiican. Isla mar ahaantaana, isbeddeladani si guul leh u noqdaan, waa in aan ka caawinno dhammaan beelaha iyo qaybaha inay isbedelaan.